Izindaba - Izinsimbi Zensimbi Ezakhiwe Ngamakhaza, Izinto Ezingahluziwe kanye Nokuqhathaniswa Kwezinga Namazinga Amahle
Imishini yensimbi eyenziwe ngamakhaza, engaba kokuqukethwe?
Imishini yensimbi eyenziwe ngamakhaza, esetshenziselwa ukukhiqiza insimbi ebanda kakhulu, uhlobo lwensimbi. Ezintweni zokusetshenziswa, imvamisa, kusetshenziswa imichilo yensimbi egoqiwe noma ebandayo njengama-billets, futhi kwenziwa neminye imisebenzi ukuthola izinsimbi ezenziwe ngamakhaza ezinobujamo nobukhulu obuhlukahlukene.
Hlobo luni lwezinto zensimbi ezakhiwe ngamakhaza ezibhekwa njengezinhle? Yimiphi imikhiqizo noma izimboni ezingasetshenziselwa umkhiqizo ophelile?
Imishini yensimbi eyenziwe ngamakhaza, amazinga ayo asezingeni elifanele, ingeyokusebenza kobuchwepheshe obuphambili nobuchwepheshe, ingenza kube lula ukusebenza nokusetshenziswa, futhi ikhwalithi yomkhiqizo ophelile iqinisekisiwe. Futhi lolu hlobo lwemishini, umkhiqizo osuphelile uyinsimbi ebanda kakhulu, inkambu yayo yokusebenza noma imboni, yenzelwa ukwesekwa ngelanga, isakhiwo sensimbi, imishini yokugcina kanye neminye imikhakha, ngaphezu kwalokho, ingasetshenziswa embonini yezimoto.
Yikuphi ebangeni lezinsimbi ezakhiwe ngamakhaza nemishini yensimbi enombala okufanele ibe nkulu?
Izinsimbi zensimbi ezakhiwe ngamakhaza nemishini yensimbi yombala, uma uqhathanisa lezi zindawo zombili, khona-ke ubukhulu bensimbi eyakhiwe ngamakhaza bukhulu, ngoba ukumbozwa kwayo kufanele kube kukhulu, nemishini yensimbi enemibala, kube yingxenye yayo kuphela, ngakho-ke Lokhu kuzoba kube yisiphetho. Ngaphezu kwalokho, kufanele sikugcine lokhu engqondweni futhi kufanele sikwenze lokho.
Imishini yensimbi ebunjiwe, ejwayelene nayo nokuyiqonda, ngikholwa ukuthi ngale ndatshana, singakwazi ukujula, futhi ngeke sime endaweni efanayo, kepha kufanele sifunde ngokucophelela, singakhathali, ukuze silubambe lolu lwazi Okuqukethwe ngesikhathi, ngakho-ke, kukusebenzise kahle futhi uzivumele uzuze kukho.